सिसाको घरमा आफू, छिमेकीकोमा गुलेली ?
डा. गाेपाल ठाकुर बुधबार, वैशाख १०, २०७७ मा प्रकाशित
लेखक: गोपाल ठाकुर
साढे दुई शताब्दीको राजनीतिक अस्थिरताबाट गएको आम निर्वाचन पछि जनताले स्थिरताको आस गरेका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठबन्धनलाई जनताले अभूतपूर्व विश्वास गरे । नभन्दै देशका दुवै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकताले झन सहज रक्त-संचारको काम गर्यो । अलि ढिलै भए पनि २ नं. प्रदेश बाहेक सबै ठाउँमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणको काम पनि लगभग पूरा भयो । तर यस बीचमा जसरी पार्टी संचालन भइरहेको अनुभूति गरियो, कम्युनिष्ट पार्टी त त्यसरी संचालन हुँदै-हुँदैन, कुनै अन्य पूँजीवादी वा सामन्ती पार्टी पनि यसरी संचालन हुँदैन । पार्टी एकता घोषणा पछि अहिलेसम्म बडो मुश्किलले एक पटक केन्द्रीय कमिटी बसेको छ भने स्थायी कमिटी दुई पटक । यस बीचमा लगातार बस्दै गरेको छ भने पार्टी सचिवालय । त्यसै गरी पार्टीको अन्तरिम विधानले पोलिट ब्यूरोलाई स्थान दिए पनि अहिलेसम्म पोलिट ब्यूरो गठन नै नहुँदा यस बारे त झन कुरै पनि उठ्न नसक्नेप भयो ।
यस बीचमा जसरी पार्टी संचालन भइरहेको अनुभूति गरियो, कम्युनिष्ट पार्टी त त्यसरी संचालन हुँदै-हुँदैन, कुनै अन्य पूँजीवादी वा सामन्ती पार्टी पनि यसरी संचालन हुँदैन ।
पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आशाको संचार गरेको थियो । तर त्यस पछि बैठकले निर्देश गरेका कामहरू पेण्डिङमै बस्दा कोरोना भाइरस रोगको महामारी नेपालमा पनि देखा पर्यो । फलस्वरूप विगत चैत्र ११ गतेदेखि पूरै देश नै बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा जकडिन पुगेको छ । यसको बावजूद सरकार प्रमुख भएको बहानामा बैठकले दिएका निर्देशनहरूलाई जसरी भए पनि छल्ने प्रवृत्ति अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीबाट प्रस्टै झल्किन थालेको थियो । उहाँकै यस्तो प्रवृत्तिले २ नं. प्रदेशमा पार्टी जिल्ला एकीकरण पनि अहिलेसम्म त्रिशंकु अवस्थामा झुण्डिएको छ । तर यसको अर्थ अन्य प्रदेशहरूमा पार्टी सुचारू रूपले चलेको भने होइन । २ नं. प्रदेशमा त्यस्ता बेथितिहरू छताछुल्ल मात्रै भएका हुन्, बाँकी प्रदेशहरूमा पनि स्थिति ठीक भने होइन । यसको मुख्य कारण आफैंसमेत सहमत भई जारी गरिएका पार्टी विधान, अन्तरपार्टी निर्देशन, विशेष परिपत्रलाई बेवास्ता गर्दै बिना कुनै विधि वा मूल्याङकन अध्यक्ष ओलीले योग्यतमलाई थेचार्ने र अयोग्यतमलाई टुपी समाएर उचाल्ने प्रवृत्ति देखाउनु नै रहेको छ । तसर्थ सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको मूलमर्म विपरीत निजी निर्णय र सामूहिक गैरजिम्मेदारीको दोषारोपणको अवस्था पार्टीभित्र हावी भएको छर्पस्ट भएको छ ।
निश्चित रूपमा पार्टीभित्र भएको बेथितिको प्रतिबिम्ब नै सरकारले प्रदर्शन गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार नभई यो अध्यक्ष ओलीको निजी सरकारको रूपमा चलेको छ, राजशाहीमा ‘श्री ५ को सरकार’ चले झैँ । वास्तवमा सरकारमा भएका मन्त्रीहरू नै प्रधानमन्त्रीका भरपर्दा सल्लाहकारहरू हुन् । तर प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीको रूपमा रहेका पार्टीका नेताहरूभन्दा तत्तैत् मन्त्रालयका नोकरशाहहरूलाई बढी पत्याउने गर्नु हुन्छ । यो प्रवृत्ति कुनै राजाभन्दा फरक देखिँदैन । तसर्थ सरकारले गर्ने निर्णयहरू पार्टीको कुनै निकायमा भएको निर्णयको आधारमा होइन प्रधानमन्त्रीको निजी तजबीजको आधारमा हुने गरेका छन् ।
त्यसैले ओली सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्तिहरूबारे पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलगायत सचिवालय सदस्यहरू नै अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेको स्थिति सिर्जित भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार नभई यो अध्यक्ष ओलीको निजी सरकारको रूपमा चलेको छ, राजशाहीमा ‘श्री ५ को सरकार’ चले झैँ ।
हुँदाहुँदा त हालै संवैधानिक परिषद तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशहरू पार्टी सचिवालय सदस्यहरूको त के कुरा पार्टीका आफ्ना समकक्षी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाईसमेत सुइँको नदिएर प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याउनु भयो । मन्त्रिपरिषदमा तीनजना मन्त्रीहरूले विरोध गरेको त के अर्थ राख्थ्यो र ? किनभने सचिवालयको बैठक त ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय पछि बोलाउनु भयो भने विचरा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको विरोधै गरेर के पो गर्न सक्थे र ! यी अध्यादेशहरू अहिले पूरै विवादमा छन् । सत्ताधारी नेकपाभित्र पनि र प्रतिपक्षीहरूको बीचमा पनि । हुन त यस बारे प्रधानमन्त्रीले राम्रै बचाउ गर्नु भएको छ ।
संवैधानिक परिषदको बैठक कतिपय अवस्थामा गणपूरक संख्याको अभावमा अवरुद्ध हुने भएकोले त्यसो गरेको भन्नुहुन्छ । तर लोकतन्त्रको यो नै सुन्दरता हो भन्ने कुरो उहाँले नबिर्सिंदा राम्रो हुन्थ्यो । त्यसै गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा उहाँको स्पष्टीकरण झन हास्यास्पद छ । उहाँको तर्क छ, केही अन्य दलका सांसद तथा नेताहरू नेकपा प्रवेश गर्न खोजेका छन् रे ! त्यसैले यसलाई सजिलो बनाइएको हो ।
जे भए पनि अहिलेको परिस्थिति विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको विरूद्धमा सिङ्गो देशलाई एक ढिक्का बनाउनु हो । यो तत्कालको आवश्यकताको लागि सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्याउने समय होइन । सबै दलको बीचमा आन्तरिक र अन्तरसद्भाव आवश्यक छ । तर यो राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले अहिलेको कोरोना विरुद्धको लडाइलाई आन्तरिक र अन्तर्दलीय दुबै तहमा लड्न शंका उत्पन्न गराएको छ । अतः यसलाई एक हदसम्म मानवता विरोधी अभ्यासको रूपमा पनि अर्थ्याइएको छ । साथै यस अध्यादेशले दीर्घकालीन रूपमा पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने सिवाय अरू केही पनि गर्न सक्तैन । किनभने सबल लोकतन्त्रको लागि दलहरू बलियो हुनु पर्छ । त्यसको लागि कुनै पनि दललाई फुटाएर अर्को दल बनाउन वा कुनै अर्को दलमा सामेल हुन केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दल दुबैमा कम्तीमा ४० प्रतिशतको मत अनिवार्य रहेको संवैधानिक प्रावधान धेरै कोणबाट सबल लोकतन्त्रको लागि अपरिहार्य छ । यसलाई यो विधेयकले धज्जी उडाएको छ । यसले राजनीतिक अवस्थालाई पुनः अस्थिरता तर्फ धकेल्ने निश्चित छ । तर यसको अर्थ यो कदापि होइन कि नेकपालाई यस अध्यादेशले केही असर नपार्ला । नभन्दै लख पनि काटिँदैछ, पार्टीभित्र अध्यक्ष ओली कमजोर पर्नु भएको छ त्यसैले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूको घाँटीमा यो तलवार झुण्ड्याउनु भएको हो ।
दलसम्बन्धी अध्यादेशले अहिलेको कोरोना विरुद्धको लडाइलाई आन्तरिक र अन्तर्दलीय दुबै तहमा लड्न शंका उत्पन्न गराएको छ । किनभने सबल लोकतन्त्रको लागि दलहरू बलियो हुनु पर्छ ।
राजनीतिक वृत्तमा चलेको यस चर्चालाई अनर्गल प्रलाप भने पनि ४० प्रतिशत संघीय संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति मध्ये कुनै एक निकायमा ल्याएर नेकपालाई फुटाउने खेल कतैबाट हुँदै-हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी पनि त गर्न सकिँदैन । तसर्थ आफैँ सिसाको घरमा बसेर छिमेकीको सिसाको घरमा गुलेली हानेको जस्तै हास्यास्पद भएको छ ओली सरकारका यी अध्यादेशहरू ।
१५१औं लेनिन जयन्ती तथा नेकपाको ७१औं वार्षिकोत्सवको बेला सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग तथा राष्ट्रियताहरूमा अग्रगामी फड्कोको सफलताको हर्दिक शुभकामना !